Iron Oxide pigments, Color Brick Midabka, Iron Oxide Color - Huamei
Iron xabagta taxane cas
Iron xabagta taxane huruud
taxane buluug darka
Iron taxane dheer oo doog ah xabagta
nidaamka toner gaarka ah ee wadada midabka
nidaamka toner Gaarka ah ee laami midabka
midabka Gaarka ah ee dabaqa
Ultrafine iyo xabagta kala firdhiyey birta
toner Gaarka ah leben dabaqa midabka
pigments midabaynta, waayo, qalabka dhismaha
Iron Midabka xabagta leh heerkulka u adkaysta Sare
dusha Architectural biyo daahan madaxtooyada
wax soo saarka shirkadda ayaa waxaa si weyn loo isticmaalaa in jidadka laamiga midabka, midab la taaban karo waddooyinka permeable, sagxadda dhulka, rinjiga, marmarka dabaqa, khad, rinjiga, dhoobada, warqad midab iyo warshadaha kale. Waxaa jira ku dhawaad ​​30 noocyo of casaan bir xabagta, xabagta bir ah huruud ah, buluug ah farcan, dabaqa cagaaran, xabagta bir madow, bir xabagta brown, miro jilicsan, iyo wixii la mid ah.
Shirkada ayaa ku dhowaad 30 sano oo taariikhda wax soo saarka ee pigments xabagta bir ah iyo waayo-aragnimo wax soo saarka oo hodan ah iyo cilmi. Midabka sallaxa ah midabka ah ayaa ansixiyey technology-soo-saarka sare iyo qalabka wax soo saarka, qaabka sayniska iyo heerarka, iyo guud ahaan heerka waa in jagada hoggaamineed in industry ee qoyska. Waa ganacsi tusidda warshadaha Shiinaha ee xabagta bir ah.
Shirkadda ayaa koox awood iyo qalab wax soo saarka iyo processing sare, technology-soo-saarka baaluq iyo adeegga kaamil-iibka ka dib. Tilmaamayaasha farsamo ee alaabta ay ka gaadhay waxayna siyaadsadeen heerarka qaranka, oo ay si fiican u dhan ayuu iibiyey dalka oo ay si fiican u helay by users.
Henan Huamei Chengde Midabka Co., Ltd. inta badan soo saartaa pigments xabagta bir ah, waxay si weyn loo loo isticmaalo waddooyinka laamiga midabka, midab leh wadooyinka la taaban karo permeable, sagxadda dhulka, rinjiga, marmarka dabaqa, Daac, rinjiga, dhoobada, warqad midab iyo warshadaha kale. Waxaa jira ku dhawaad ​​30 noocyo of cas, huruud ah, iyo buluug, cagaar ah, madow, brown, iyo guduud, orange, cawl, miro jilicsan, iyo wixii la mid ah. Tan iyo dhisidii, shirkadda ayaa aasaasay dhamaystiran kormeerka ah muunad iyo sampling, nidaamka haynta muunad, gacanta wax ku ool ah falanqaynta muunad iyo shixnad saarka raadraaca waafaqsan adag nidaamka ISO9001 caalamiga ah maaraynta tayada iyo ISO14001 heerarka nidaamka maamulka deegaanka caalamiga ah. Kuwani waxay ku siin karaan waxyaabaha Midabka tayo leh oo deggan iyo sare.
jaalaha ah xabagta ferric
(Maxaa yeelay, shuruudaha isticmaalka dhabta ah beyon yihiin ...
cas xabagta ferric
xabagta madow birta
waxqabadka Product: jireed heer sare ah iyo ...
koonfur ee isgoyska of Louli Xian iyo Xian Zhaoyan dalka Huojia, Xinxiang, Gobolka Henan
Talooyin - Products Hot - Sitemap - amp Mobile © Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved.
Rinjiga Hot Sale Midabka Powder Iron Oxide Yellow, Iron Oxide Red Waayo daahan , Iron Oxide Midabka Red Black Brown Oo Yellow Color, Iron Oxide Red 130 , Red Iron Oxide Black, Qiimaha Iron Oxide Factory Red ,